AMISOM Oo Saraakiil Boolis Ah Usoo Xirtay Tababar – Great Banaadir
Muqdisho (SONNA) -Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa sheegay in ay shalayto soo gaba-gabeeyeen tababar muddo afar maalmood ah ugu socday Magaalada Muqdisho 160 saraakiil Boolis ah oo katirsan AMISOM.
AMISOM ayaa sheegtay in saraakiisha Booliska ah ee ka socda dalka Uganda ay joogi doonaan Soomaaliya muddo hal sano ah, iyagoo gacan ka geysan doona ilaalinta sharciga, kala dambeynta iyo sugidda nabad gelyada dalka.
Taliyaha Ciidanka Booliska AMISOM Augustine Kailie , ayaa sheegay in saraakiishani ay sii fulin doonaan tababarro, howlaha kormeerka iyo la talinta Ciidamada Booliska Soomaaliyeed.
Augustine Kailie, ayaa saraakiisha uu tababarku u dhammaaday u sheegay in ay Soomaaliya ujoogaan howlo nabad ilaalin ah, wuxuuna kula dardaarmay inay dhowraan xiriirka wanaagsan ee ay la leeyihiin bulshada martida loo yahay.
Saraakiishan ayaa sidoo kale lagu wadaa in ay gacan ka geystaan howlaha sugidda ammaanka xilliga doorashada madaxtinimo oo dhowaan la filayo in ay ka dhacdo dalka Soomaaliya.
Dhacdo Argagax Leh Ayaa ka Dhacday Beled Weyne